ကမ္ဘာ့သက်တမ်းအရင့်ဆုံး ဝီစကီတစ်စက်ပါဝင်တဲ့ ကျပ်သိန်း ၆၂၀ တန်နာရီ
23 Mar 2017 . 2:59 PM
ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေထဲမှာ နာရီတွေ၊ ဝီစကီတွေဟာလည်း ထိပ်ဆုံးနေရာက ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဆွစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ဒီနှစ်မျိုးလုံးကို ရောလိုက်ပြီး ပစ္စည်းတစ်ခုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုရောလိုက်တယ်ဆိုလို့ နာရီကို ဝီစကီနဲ့ရောပြီး စိမ်သောက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ :3 နာရီနဲ့ ဝီစကီကိုပူးပေါင်းပြီးတော့ ဖန်တီးခဲ့တာပါ။
Swiss နာရီထုတ်လုပ်သူဖြစ်တဲ့ Louis Moinet ဟာ Wealth Solutions ဆိုတဲ့ပိုလန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ကမ္ဘာ့နှစ်အချို့ဆုံး ဝီစကီတစ်စက်ထည့်သွင်းထားတဲ့ အထူး Luxury ပစ္စည်းတစ်ခုကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့သက်တမ်းအရှည်ဆုံး Old Vatted Glenlivet 1862 ဝီစကီကို ဖန်ခန်းအသေးလေးတစ်ခုထဲထည့်ပြီး စုစုပေါင်းအလုံးငါးဆယ်သာထုတ်လုပ်တဲ့ နာရီမှာ ထည့်သွင်းခဲ့တာပါ။
ဒီနာရီရဲ့ ရွှေသားဗားရှင်းနဲ့ Whisky Watch ကို ဈေးနှုန်းဒေါ်လာ ၄၅၀၀၀ (ကျပ်သိန်းပေါင်း ၆၂၀နီးပါး) နဲ့ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီး ဒါဟာဆိုရင် Louis Moinet နာရီတွေရဲ့ အလယ်အလတ်ဈေးနှုန်းအဆင့်လောက်ပဲရှိသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရွှေမဟုတ်ပဲ စတီးလ်ဗားရှင်းအတွက် ဆိုရင်တော့ ဒေါ်လာ ၁၇၀၀၀ (ကျပ်သိန်း ) ကျသင့်မှာပါ။
ဒီအကြောင်းကို Wealth Solutions က Instagram စာမျက်နှာမှာ လည်းတင်ထားခဲ့ပါတယ်။
New Spirits Watch – Whisky Watch ⌚️ Louis Moinet and Wealth Solutions. Interesting? What do you think? Photo – @r.maciek #watch #watches #wealthsolutions #louismoinet #luxurywatches #luxury #limitededition #whisky #whiskygram #prototype #swisswatch #sınglemalt #watchgeek #watchcollector #
တကယ်လို့ နှစ်ချို့ Old Vatted Glenlivet 1862 ဝီစကီကို သောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒေါ်လာ ၇၀၀၀နဲ့ ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။ ပြီးရင်နာရီကုမ္ပဏီတစ်ခုခုကို ကိုယ်တိုင်သွားပြီး နာရီမှာ အဲ့ဒီအရက်ထည့်ခိုင်းလိုက်ရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀လောက် ချွေတာနိုင်တဲ့ ပုံစံတူနာရီရပါပြီ။ ပိုတဲ့ဟာကိုတော့ ခင်ဗျားသောက်လိုက်ပေါ့။ အရမ်းတန်ဖိုးကြီးတယ်နော့.. 😛
ဒီနာရီကိုဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လာမယ့် ဧပြီလ ၈ရက်နေ့မှာ စတင်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ 🙂
ကမ်ဘာ့သကျတမျးအရငျ့ဆုံး ဝီစကီတဈစကျပါဝငျတဲ့ ကပျြသိနျး ၆၂၀ တနျနာရီ
ဇိမျခံပစ်စညျးတှထေဲမှာ နာရီတှေ၊ ဝီစကီတှဟောလညျး ထိပျဆုံးနရောက ပါဝငျပါတယျ။ ဒီတဈခါမှာတော့ ဆှဈကုမ်ပဏီတဈခုက ဒီနှဈမြိုးလုံးကို ရောလိုကျပွီး ပစ်စညျးတဈခုဖနျတီးခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုရောလိုကျတယျဆိုလို့ နာရီကို ဝီစကီနဲ့ရောပွီး စိမျသောကျတာမြိုးမဟုတျပါဘူး။ :3 နာရီနဲ့ ဝီစကီကိုပူးပေါငျးပွီးတော့ ဖနျတီးခဲ့တာပါ။
Swiss နာရီထုတျလုပျသူဖွဈတဲ့ Louis Moinet ဟာ Wealth Solutions ဆိုတဲ့ပိုလနျကုမ်ပဏီတဈခုနဲ့ ပူးပေါငျးပွီး ကမ်ဘာ့နှဈအခြို့ဆုံး ဝီစကီတဈစကျထညျ့သှငျးထားတဲ့ အထူး Luxury ပစ်စညျးတဈခုကို ထုတျလုပျခဲ့ပါတယျ။ ကမ်ဘာ့သကျတမျးအရှညျဆုံး Old Vatted Glenlivet 1862 ဝီစကီကို ဖနျခနျးအသေးလေးတဈခုထဲထညျ့ပွီး စုစုပေါငျးအလုံးငါးဆယျသာထုတျလုပျတဲ့ နာရီမှာ ထညျ့သှငျးခဲ့တာပါ။
ဒီနာရီရဲ့ ရှသေားဗားရှငျးနဲ့ Whisky Watch ကို စြေးနှုနျးဒျေါလာ ၄၅၀၀၀ (ကပျြသိနျးပေါငျး ၆၂၀နီးပါး) နဲ့ ထုတျလုပျရောငျးခသြှားမှာဖွဈပွီး ဒါဟာဆိုရငျ Louis Moinet နာရီတှရေဲ့ အလယျအလတျစြေးနှုနျးအဆငျ့လောကျပဲရှိသေးတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရှမေဟုတျပဲ စတီးလျဗားရှငျးအတှကျ ဆိုရငျတော့ ဒျေါလာ ၁၇၀၀၀ (ကပျြသိနျး ) ကသြငျ့မှာပါ။
ဒီအကွောငျးကို Wealth Solutions က Instagram စာမကျြနှာမှာ လညျးတငျထားခဲ့ပါတယျ။
တကယျလို့ နှဈခြို့ Old Vatted Glenlivet 1862 ဝီစကီကို သောကျခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒျေါလာ ၇၀၀၀နဲ့ ဝယျယူလို့ရပါတယျ။ ပွီးရငျနာရီကုမ်ပဏီတဈခုခုကို ကိုယျတိုငျသှားပွီး နာရီမှာ အဲ့ဒီအရကျထညျ့ခိုငျးလိုကျရငျတော့ သငျ့အနနေဲ့ ဒျေါလာ ၂၀၀၀၀လောကျ ခြှတောနိုငျတဲ့ ပုံစံတူနာရီရပါပွီ။ ပိုတဲ့ဟာကိုတော့ ခငျဗြားသောကျလိုကျပေါ့။ အရမျးတနျဖိုးကွီးတယျနော့.. ?
ဒီနာရီကိုဝယျယူခငျြတယျဆိုရငျတော့ လာမယျ့ ဧပွီလ ၈ရကျနမှေ့ာ စတငျရရှိနိုငျမှာဖွဈကွောငျးလညျး သိရပါတယျ။ ?